Ọdịnihu nke Martech | Martech Zone
Ugbu a na ọdịnihu nke Teknụzụ Ahịa ka arụrịta ụka ma weghaara ya na nnabata Nzukọ Martech na Boston. Ọ bụ ihe omume rere ere nke mere ka ndị ndu echiche dị iche iche gbakọta na ụwa Martech. Na mbu, enwerem ohere jikọọ ya na oche ogbako, Onye edemede Scott Brinker, iji kpaa maka nzụlite ụlọ ọrụ na otu ọrụ nke Onye isi ahia ndi ahia aburula oru di nkpa n'ime ndi oru ahia gburugburu uwa.
Na mkparịta ụka anyị, Scott kwusiri ike, n'ụzọ doro anya:
Nnukwu ihe ịma aka nnabata nke Martech, bụ mmadụ karịa ọrụaka. Teknụzụ ahịa enyerela ụzọ ọhụrụ maka ndị na-ere ahịa jikwaa òtù ha na-emefu, na-etinye atụmanya, ma tụọ nsonaazụ ahịa, mana ha ka na-achọ echiche ọhụrụ, omume na nka gafee ndị otu azụmaahịa iji nweta ikike zuru oke.
Dị ka ọrụ nke ọkà mmụta sayensị na-ere ahịa (na ọkwa niile) na-aga n'ihu na-agbasi mbọ ike, Scott kọwara etu ọrụ n'onwe ya na-esi enweta ngwa ngwa. Iji mesie ike, o kwuru mgbe ọ malitere nke ya @Chiefmartec blog na 2008, nsonaazụ ọchụchọ Google tụgharịrị uche 245. Taa, Onye isi ahia ndi ahia na-etu ọnụ karịa ndepụta 376,000. Ọ kọwara n'ụzọ doro anya na uru ọrụ a bara bụ na ọ bụ ihe enyemaka dị mkpa anọ, nke gụnyere:
Perationrụ ọrụ mmekọrịta n'etiti ahịa na IT
Na-eje ozi dịka onye ndụmọdụ a tụkwasịrị obi nke CMO n'okwu banyere otu teknụzụ si emetụta atụmatụ azụmaahịa ụlọ ọrụ ahụ
Vernchịkwa akụkụ dị iche iche nke mmekọrịta dị n'etiti ngalaba ahịa na ọnụọgụ nke ndị na-enye ọrụ ahịa - ụlọ ọrụ dị iche iche, ndị ọrụ ngo, ndị na-ere ngwanrọ
Inyere ndi ahia ahia aka - ndi n’edighi ahia ahia - iji kpoo teknụzụ nke ọma
Scott nwekwara ntukwasi ke Martech mmetụta na ahịa Amawaputala, na-ekwusi ike na "Ihe niile na-egosi bụ na ahịa na-aga na-amụba ya investments na nkà na ụzụ na a ịrịba larịị." N'ezie, na Nzukọ Martech, '' Laura McClellan, onye nyocha dị elu na Gartner Group, emelitere amụma ya na CMOs ga-etinyekwu ego na teknụzụ mgbe ahụ CIO site 2017.
Laura kwupụtara na anyị abatalarị nke a, afọ atọ tupu oge ahụ. Scott kwusiri ike na teknụzụ ịzụ ahịa bụ ebe nnukwu ohere dị. Ego iji kwado itinye ego na teknụzụ na-abịa site n'ọtụtụ ụzọ: nchekwa ego na arụmọrụ arụmọrụ ka mma maka ngwa ọrụ ka mma na nchịkọta, na-agbanwe site na mmefu ego nke mgbasa ozi, na-agbanwe na ihe ndị IT na-ebute ụzọ, na ụgbụ ahịa mmefu ọhụrụ nke CEO nyere ikike ịmepụta ndị ahịa ọhụrụ na ego ha nwetara.
N’ile anya n’ihu oke uzo ozo nke Martech, Scott buru amuma ohuru karie ihe ndi ozo n’eme ka “nkpoko” di iche-iche di nfe ime ulo na ijikwa. N'ihi ya, ọ na-ekwu, nke a ga-aga "ụzọ dị egwu iji mee ka ndị ahịa nwee ike ịnwale nnwale ndị ọzọ na-enweghị isi na-enweghị nkụda mmụọ na isi ọwụwa dị mgbagwoju anya maka nke ọ bụla."
Na Nzukọ Martech mbụ nke dị ugbu a n'azụ anyị, enwere ọbụna mkpali na nzipụta maka teknụzụ ahịa na ọrụ nraranye ya. Dịka onye bịara ya, ọ bụ nkwa na ịnụ ndị na-ekwu okwu na-ewusi mkpa ọ dị maka ịdị n'otu n'etiti ihe ngwọta Martech, ihe anyị kwenyere na ya iwekota dị oke egwu maka ọganiihu ahịa. Enwekwara mmachi banyere agha agha maka ndi ahia ahia nke nwere ike iwulite, ijikwa ma mezuo ahia di omimi nke na eme ka ihe di nma.
Ọ ga-abụ ihe na-atọ ụtọ ịhụ ka anyị dị ka CMO na-achọwanye mmụba a ka ọrụ nke anyị na-agbanwe ma na-agbasa. Nke a bụkwa isiokwu na ogbako ahụ - kedu ka CMO ga - esi kọwaa ahịa, mepee ma jikwaa ngwaahịa na mmemme yana nweta ma jigide ndị ahịa. Ọ bụghị ọrụ dị mfe, ma ọ bụ na enweghị teknụzụ
Ezie na enwere otutu uzo bara uru site na Onwuchekwa, otu isi nkwekọrịtara ọnụ n’etiti ndị sonyere bụ mkpa maka atụmatụ Martech. Ndị CMO na ụlọ ọrụ azụmaahịa enweghị ike ị nweta nri otu teknụzụ azụmaahịa ha, ndị mmadụ na usoro. Ha choro usoro di omimi iji kwalite ma tụọ ihe. Ọdịnihu Martech abịala. Dịka CMO, enwere m obi ụtọ ịnwe oche ihu na Martech rollercoaster.
Tags: onye isi ozionye isi ahiama ọ bụ cmojio vs cmoKedun'ọdịnihuọdịnihu nke teknụzụ ahịajikọtaitmarketingahia mmefu egoarụmọrụ ahịateknụzụ ahịankataogbako martecharụmọrụscott brinkerAha ya bụ Scott Vaughanteknụzụ ahịa
Ụdị Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi 2014